Mpandresy ny Visa Checkout tokana an'ny Visa! | Martech Zone
Wednesday, May 20, 2015 Talata, May 19, 2015 Douglas Karr
Ny fidirana tokana tokana dia voaporofo fa mandaitra manerana ny solaitrabe - na amin'ny fampiasana ny fidirana sosialy hamenoana ny takelaka fisoratana anarana, na izao amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo haitao fandoavambola mba hanovana mpanjifa haingana. Visa manolotra famantarana tokana amin'ny rafitra antsoina hoe Visa Checkout izay efa manana fananganana an-dàlana malalaka.
Miaraka amin'ny fitomboana haingana ao anatin'ny 10 volana lasa, ny Visa Checkout dia nahita tahan'ny fananganana sy fifanakalozan-kevitra lehibe. Hanomboka fanentanana iraisana amin'ny marketing sy dokambarotra lehibe izy ireo amin'ity fahavaratra ity. Hatreto aloha dia nahavita be izy ireo tamin'ny indostria.
Kaonty mpanjifa 4 tapitrisa
Mpivarotra lehibe sy kely maherin'ny 125,000
Mpiara-miasa amin'ny andrim-panjakana 260
Tamin'ny fandalinana comScore vao haingana (jereo eto ambany), dia naseho fa ny mpivarotra Visa Checkout dia nahita an salanisan'ny tahan'ny fiovam-po 69% ho an'ny mpampiasa efa misy manao fividianana. Ity dia 66% avo kokoa noho ny tahan'ny fiovam-po voalaza tamin'ny fizahana an-tserasera nentim-paharazana
Ny laharana antonony napetraka niaraka tamin'ny Visa Checkout dia 7% isan-jato no avo kokoa noho ny baiko napetraka tamin'ny tranokala fivarotana sy fitsangatsanganana misy safidy hafa fandoavam-bola. Tatitra iray hafa nataon'i Millward Brown no nahitana fa 95% isan-jaton'ny mpanjifa Visa Checkout no nilaza mora ny fisoratana anarana ary 96% hoy izy ireo nahatsiaro ho voaro mampiasa izany.
Visa koa dia hanao ezaka lehibe amin'ny fanentanana miaraka amin'ny marketing sy dokam-barotra hanombohana ny fahavaratra.
Tags: fandoavam-bola amin'ny Internetfanodinana volafamantarana tokana amin'nyvisa hofizahana visa
Singa 4 hitarika lozisialy mitondra amin'ny automatisation marketing